Okwabathandi bemvelo - I-Airbnb
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Comba
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe ise- San Roque de Riomiera, enye yama-villa amathathu ase-Pasiegos Valleys. Izinto ezenziwayo njengokuqwala izintaba, ukugwedla ngesikebhe, ukugibela amahhashi, noma ukuhamba ngebhayisikili entabeni. Ngezingane, i-Cabá Arceno Park. Ngebanga elingamakhilomitha angu-35 nje uzothola amabhishi amahle ase-Gas, e-Loredo, e-Langre noma e-Langre. Vega de Pas, Liérganes, Puente Viesgo. Idolobha lase-Santander nalo liseduze kakhulu, liqhele ngamakhilomitha angu-40.
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe inezitezi ezimbili. Isitezi esiphezulu sinegumbi lokugezela namakamelo okulala angu-3: amabili anombhede olala abantu ababili kanti elinye elinemibhede emibili (i-URL IFIHLIWE). Indawo yaphansi ivulekile. Kuyo uzothola ikhishi, igumbi lokudlela kanye nekhishi (i-URL EFIHLIWE) ine-microwave, iketela, i-blender, (i-URL IFIHLIWE) ngaphandle inendawo lapho ungapaka khona izimoto ezingu-2-3. Umgwaqo wokungena endlini uyakhuphuka kodwa ungase wehle izimoto ngaphandle kwenkinga.
Kule ndawo, izindawo ezizungeze amadolobha amakhulu zihlakazekile kuyo yonke isigodi. Akuyona indawo ezungeze idolobha elikhulu ongayisebenzisa. Kukhona umzila oqala endlini futhi ukusa edolobhaneni elingamakhilomitha angu-5 ukusuka emgwaqeni. Edolobhaneni kunesitolo esincane sokudla esinazo zonke izinto eziyisisekelo futhi ezidingekayo. Kukhona futhi ikhemisi, umtholampilo wezokwelapha kanye nezindawo ezintathu zokungenisa izihambi. Kukhona nemakethe encane ngoMgqibelo. Kokubili i-Liérganes (19 km) ne-Selaya (17 km) zinezinhlobo zonke zamasevisi.
Uma kwenzeka ngingakwazi ukutholakala ngezinsuku zokubhukha, kuzoba nomuntu othembekile ozokunika okhiye futhi abike konke okudingwa yizivakashi. Nganoma yimiphi imibuzo engase ivele ngesikhathi sokuhlala kwakho, ngizohlezi ngitholakala ngocingo.
Uma kwenzeka ngingakwazi ukutholakala ngezinsuku zokubhukha, kuzoba nomuntu othembekile ozokunika okhiye futhi abike konke okudingwa yizivakashi. Nganoma yimiphi imibuzo engase ive…
Hlola ezinye izinketho ezise- Cantabria namaphethelo